Tag: kukwirisa | Martech Zone
Ndeapi Zororo 2020 Akatidzidzisa NezveMafoni Ekushambadzira Maitiro mu2021
Muvhuro, Ndira 11, 2021 Muvhuro, Ndira 11, 2021 Joe Intile
Izvo zvinopera pasina kutaura, asi mwaka wezororo muna 2020 wanga wakasiyana nemamwe atakamboona sevakagadzira. Nezvirambidzo zvekusiyana kwenzanga zvakare kubata pasi rese, maitiro evatengi ari kuchinja kubva mutsika dzechinyakare. Kune vashambadziri, izvi zviri kuramba zvichitibvisa pamagariro echinyakare uye ekunze-kwe-Kumba (OOH), uye zvichitungamira mukuvimba nefoni uye nedhijitari kubatanidzwa. Pamusoro pekutanga pakutanga, kuwedzera kusati kwamboitika mumakadhi echipo akapihwa kunotarisirwa kuwedzera zororo
Playoff: Wedzera iyo Gamification Layer Mune Chero System
China, December 13, 2018 Chishanu, December 14, 2018 Douglas Karr
Kuita nzira dzekumisikidza inzira huru yekukurudzira chinangwa chako kuenda padanho rinotevera. Kana iwe uine software iripo kana maitiro aungade kuwedzera iyo dura rekumisikidza uye iwe usina nguva yekuva neyako timu yetimu yevagadziri inovaka mhinduro yakazara, ipapo Playoff inopa inokurumidza, yakanaka imwe nzira. Playoff isimba ine simba injini iyo inogona kuve nyore kubatanidzwa kuburikidza ne SDK API mune chero
Vanhu vanondinakidza. Vape yakanaka yekushambadzira meseji nemutengo uye ivo vobva vaenda ... asi vape iwo mukana wekuhwina bheji pane yavo peji peji uye ivo vanozoirwira. Ndiri kuzvivaraidza pandinowana ndichivhiringidzika mushure mekurasa meya paFoursquare - hazvina musoro. Izvo ndizvo chaizvo izvo gamification zvinoenderana nazvo. Nei Gamification Ichishanda? Gamification inoshanda kugutsa zvimwe zvezvakakosha zvishuwo zvevanhu: kuzivikanwa uye mubairo,
SOCXO: Kutsigira Kushambadzira neKushanda-Yakavakirwa Mitengo
Chipiri, February 20, 2018 Muvhuro, Kukadzi 19, 2018 Mukund Krishna
Sechikamu cheMukati meKushambadzira nzvimbo, Dhijitari Kushambadzira kusvika parizvino ndiyo nzira yakasarudzika yeBrands kusvika nekuita vateereri vayo online. Iyo yakajairika Dhijitari Yekushambadzira modhi inosanganisira mubatanidzwa weEmeile, Tsvaga uye Yemagariro Media Kushambadzira uye kusvika parizvino vashandisa nzira uye yakabhadharwa nzira kugadzira nekuparadzira mhando yezvinhu online. Nekudaro, kwave kune zvinetswa nemakakatanwa pazano, kuyerwa, mhedzisiro uye ROI yenhau dzakabhadharwa